I-PlayStation iyaphula ngemidlalo yePS Plus ngo-Agasti | Iindaba zeGajethi
I-PlayStation iyaphula ngemidlalo yePS Plus ngo-Agasti
Apha siphinde sakuxelela malunga nemidlalo uSony Computer Entertainment ayilungiselele bonke abasebenzisi bePlayStation. Njengoko usazi kakuhle, abo banandipha izibonelelo zokubhaliselwa PlayStation Plus Kwi-ID yabo ye-PlayStation, banothotho lwesoftware kunye nomxholo womdlalo wevidiyo inkampani yaseJapan evumela abasebenzisi bayo ukuba bayikhuphele inyanga yonke kwaye igcinwe kwilayibrari yabo ngonaphakade.
Kwinyanga ephelileyo u-Sony wabona kufanelekile ukuba afake imidlalo ekumgangatho ophezulu, kodwa into ebesingacingi ukuba iza kubandakanya ezimbini ezaziwayo kathathu A ngobhaliso luka-Agasti PS Plus, ngeli xesha Unobangela nje wesi-3 kunye noMgaqo ka-Assassin: Inkululeko yokukhala. Makhe sijonge kwimidlalo yasimahla ka-Agasti kwi-PlayStation Plus.
1 Imidlalo yasimahla yePS4 ngePlayStation Plus Agasti 2017
2 Imidlalo yasimahla yePS3 kunye nePS Vita ngo-Agasti 2017
Imidlalo yasimahla yePS4 ngePlayStation Plus Agasti 2017
Siqala nge Inkolelo ka-Assassin: Inkululeko yokukhala, i-adventure eyenzekayo Inkolelo ka-Assassin: Iflegi emnyama. Kuyo siya kuzalwa njengo-Adewale, ikhoboka elenza elalo ibali ngenjongo yokufumana inkululeko oyifunayo. Kodwa lo mdlalo omnandi awuzi wedwa, kuyafuneka ukonwabele Isizathu nje 3, Ukukhutshwa kwisitayile sokwenyani saseMelika, lindela ininzi yesitoli kunye nesenzo sebhokisi yesanti kumdlalo.
Imidlalo yasimahla yePS3 kunye nePS Vita ngo-Agasti 2017
Oodade abancinci be-PlayStation 4 abafutshane, kuba ingxelo yokugqibela esiza kuba nayo kwangoko Super Ukulayisha komama, Umdlalo wexesha elizayo malunga neMars, nangona iyi-2D yemizobo ebandakanya imo yokubambisana. Sikwanayo Ibhola yenyoka, umdlalo wenyoka kodwa kuguqulelo lwe-3D.
KwiPS Vita esinayo Downell y Nqanaba 22, eyokugqibela iklasikhi. Nangona kunjalo, le midlalo iya kufumaneka kuyo yonke inyanga ka-Agasti, nangona usenalo ixesha elincinci lokukhuphela imidlalo ebisimahla ngenyanga kaJulayi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » I-PlayStation iyaphula ngemidlalo yePS Plus ngo-Agasti
Ii-PcDays, ifomula enomvuzo yePcComponentes